Shan Sababood Oo Barcelona Ku Xulatay Yerry Mina » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Real Madrid Oo Guul Ciriiri Ah Ka Gaartey Leganes Iyo Marcos Asensio Oo Fakiyay Los Blancos
Iniesta Oo Ka Warbixiyay Inta Uu La Egyahay Dhaawciisa Isagoona Fariin U Soo Diray Jamaahiirta Barca
Drogba Oo Beeniyay Inuu Hami Siyaasadeed Leeyahay Xili Uu Hada Qabto Shaqo Yaab Leh
Shaxda Rasmiga Ah Leganes vs. Real Madrid Ee Kulankooda Copa del Rey Oo La Shaaciyey
Gareth Bale Oo Maamulka Real U Sheegay Kooxda Uu Doonayo Inuu Ku Biiro Bishaan Janaayo
Shaqsiga Ay Jamaahiirta Arsenal Ay Ku Eedeyn Doonaa Bixitaanka Sanchez Oo Lasoo Bandhigay
Zidane Oo Talo Cajiib Ah Siiyey Ronaldo Oo Ku Aadan Mustaqbalkiisa [Ma Inuu Iska Baxan Mise]
WARBIXIN: Ciyaaryahan Caan Ah Oo Ku Biiray Kooxda Daacish Oo Duqeyn Lagu Dilay [Sawiro]
QIIMEYN: Ciyaaryahankii Ugu Fiicnaa Isbuucaan Kulamadii La Liga Laga Dheelay Oo La Shaaciyey
Mbappe Oo Ka Hadlay Hadii Uu Ku Biirayo Real Kadib Marka Uu Ka Dhamaado Heshiiskiisa PSG
Home/ Falanqeynta/Shan Sababood Oo Barcelona Ku Xulatay Yerry Mina
Shan Sababood Oo Barcelona Ku Xulatay Yerry Mina
Ramzi Yare January 13, 2018
Barcelona ayaa heshiis la gashay difaaca xulka qaranka Colombia iyo kooxda reer Brazil ee Palmeiras, kaas oo ay kusoo qaadatay 12 milyan oo Euro.
23 jirkan awoodda badan, ayaa waxa uu qalinka ku duugay heshiis shan sannadood iyo badh ah, waxaana uu beddelayaa Mascherano oo ka tegaya Barcelona, isla markaana kusii jeeda waddanka China.
Haddaba, Barcelona ayaa la ogaaday sababihii ay ku xulatay cayaartoygan oo ay ka eegtay shan arrimood, kuwaas oo sabab u noqday inay ku bixiso lacag badan, isla markaana ku aaminto difaaca iyo booska uu bannaynayo Mascherano.
Shanta arrimood ee Barcelona ay ku xulatay cayaartoygan ee Yerry Mina
Awoodda kubbadaha sare
Waa cayaartoy dheer oo lagu qiyaasay 1.93 mitir oo ka dhigaysa inuu ka mid yahay laacibiinta ugu dheer kubadda cagta. Khadka dambe ee difaaca ee uu hibada u leeyahay inuu ka cayaaro, marnaba suurtogal maaha in weeraryahannadu fursad u helaan inay kubbad ka madaxeeyaan. Marka koorne lasoo laago, inta badan madaxiisa ayaa uu la helaa, iyadoo aad mooddo inay ballansan yihiin. Intii uu ka cayaarayay horyaalka waddanka Brazil, waxa uu ka mid noqday difaacyahannada qaaradda Latin America ugu gool-dhalinta badan, kuwaas oo dhamaantood uu ku dhaliyey madaxa.
Inkasta oo uu yahay cayaartoy dheer, haddana awoodda uu u leeyahay kubbadaha hoose ee dhulka socda iyo kuwa cayaartooyada dhexdooda ku jira, waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan. Ka sokow farsamada, waxa uu leeyahay awood jidheed iyadoo miisaankiisu yahay 75 kgs. Intii uu joogay horyaalka waddanka Brazil, waxa uu horumar badan ka sameeyey qaabka difaaca iyo farsamooyinka looga reebo kubbadda weeraryahannada, waxaana taas u dheer xawaare dheereeya.
Marka uu kubadda difaacayo, uma eka cayaartoy uu culays saaran yahay, waxaanad moodaa in uu khadka dhexe ka cayaarayo. Kubbad jiidis, dhiibis iyo inuu la socdo dhaqdhaaqa dhinacyadiisa ayaa lagu yaqaanaa, waxaanay taasi si fiican ula jaan-qaadaysaa hannaanka cayaareed ee Barcelona.
Fal-celintiisa degdegga iyo in aanu gelin khalad, waxay ka dhigaysaa cayaartoy cajjiib ah oo haddana kaadhadhkiisu aad u yar yihiin. Illaa hadda, intii uu cayaaraha ku jiray, hal mar ayaa kaadh cas la siiyey, kaas oo ahaa kulan ay Palmeiras 2013 la cayaartay Deportivo Pasto.
Waa 23 jir boos joogto ah ka haysa xulka qaranka Colombia ee Koobka adduunka 2018 ka qayb-gelaya, waxaana lagu tilmaamay cayaartoyga ugu wanaagsanaan doona tartankaas kasoo bixi doona.
Manchester United Oo € 500m Kula Soo Wareegeysa xiddig Barcelona Horay Ugu Soo Cayaaray
YAAB :Daawo Wixii Uu Diego Cost Sameeyay Intii Lagu Gud jiray Tababarkii Kooxdiisa